Nezvedu - Dongguan Sunkia Machinery Co., Ltd.
Dongguan Sunkia Machinery Co, Ltd.
Michina yedu inozivikanwa uye yakakwirira kuongororwa nevakawanda vatengi vekumba uye kune dzimwe nyika.
Isu tanga tichisimbirira pamisimboti ye "Hunhu, Kuvimbika, uye Kushushikana"Kubva pakagadzwa muna2008. Zvichida akawanda makuru ekuvandudza kweanopera makore gumi nemaviri uye ave China inotungamira mhando. Bhizinesi redu riri kuramba richikura uye hunhu hwedu nebasa rinokunda kukoshesa kwakakwirira kubva kune vatengi vese pamusika weChina nemusika wepasi rose. Isu tiri mutungamiri mumunda wayo uye yakatsaurirwa kuburitsa mapepa ekuputira tekinoroji uye michina yemhando yepamusoro kumakambani mazhinji ekudhinda boka nekambani yeruzhinji.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru otomatiki OPP laminating muchina otomatiki UV varnishing muchina, Multi-inoshanda hwindo laminating muchina, Yekumhanyisa roll yekumonera muchina, Yekumhanyisa calendering muchina, Rigid uye chipo bhokisi yekugadzira michina, uye mimwe inoenderana yapfuura-yekudhinda michina. Isu tinonyanya kuzivikanwa uye tinorumbidzwa nevatengi. Ndiyo inotungamira kambani mune yekudyara indasitiri. Parizvino, kambani yedu yakachengetedza yakanaka bhizimusi kudyidzana neanoverengeka anorema epamba uye ekunze ekudhinda emabhizinesi. Kambani yedu inoteedzera kugona kwevatungamiriri, kupona nemhando yepamusoro, nekusimudzira nemukurumbira, uye inoshingairira kugadzirisa hunhu uye hunhu hwezvigadzirwa, inonamatira kune vatengi-vanotungamira uye kuhwina-kuhwina bhizinesi uzivi. Gamuchira noushamwari kuti utaure nesu uye utishanyire. Ndatenda.
Chinangwa chedu kugadzirisa zvigadzirwa zvekurongedza mapepa uye kushandisa maitiro edu kuzadzisa chinangwa chekushomeka / kushandiswazve uye Green kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, iyo ine simba rakakura pane ramangwana kurongedza uye indasitiri yekudhinda. Chinangwa chedu ndechekupa hunyanzvi hwekurongedza pamusoro peyekushongedza michina, akakosha-akawedzera michina, inoenderera mitsva, kugona kwevatengi, kuzvishingisa